China Yakakwira-kumhanya otomatiki katoni kugadzira uye yekupinza yekugadzira mutsara Gadzira uye Fekitori |S-conning
High-speed otomatiki katoni kugadzira uye yekupinza yekugadzira mutsara
Inoshanda kune akasiyana marudzi emabhodhoro, senge remuromo mabhodhoro emvura, ampoules, schering mabhodhoro uye peni-injection.
High-speed Automatic Carton Kugadzira & Input Production Line
Iyi Fully Automatic Inter ndiyo musanganiswa wakakwana weS616 ZT384 uye Z130, ichigonesa kugadzirwa kwepamusoro kwakakodzera mishonga, chikafu, zvinwiwa, zvekuzora, zvekugezesa, petrochemical maindasitiri nezvimwe.Iyi yekurongedzera yakanyorwa yekudyisa tireyi yekugadzira muchina ndiyo yako yakanakisa sarudzo yekugadzira otomatiki uye yekuisa mazita ekushandisa muchina wemabhokisi.
Iyo servo inotyairwa bhodhoro yekurongedza muchina mutengo wakagadzirirwa kushanda nyore uye nekukurumidza shanduko kune dzakasiyana zvigadzirwa.Muchina unogona kugadzirisa zviri nyore zvichibva pane zvakatemwa nevatengi uye zvinodiwa.
-Inoshanda kumhando dzakasiyana dzemabhodhoro, senge remuromo mabhodhoro emvura, ampoules, schering mabhodhoro uye peni-injection, nezvimwewo, ane dhayamita idiki pane 25mm.
ampoules, schering mabhodhoro uye peni-majekiseni, nezvimwewo, ane dhayamita idiki pane 25mm.
-Muchina wakazara unotora servo labeling system uye chisimbiso label, nekuita kwakaringana kwehungwaru kubatanidza kwekugadzira, katoni kupinza uye punching.
-PVC firimu rekudya rinodzorwa ne servo system, imwe inoumba imwe neimwe yekudyisa, ine kunyatso kudzora uye kubvisa zvinhu zvisina kugadzikana zvinokonzerwa nemakanika chimiro.
-Iyo katoni isina kukwana inogona kuwonekwa neiyo yekuona mashandiro eiyo katoni yekugadzira yuniti kudzivirira kuiswa mubhokisi.
-Iyo HMl hombe yekubata skrini inopa ruzivo rusina kujairika kuratidza uye dambudziko-kupfura kutungamira, pamwe nekushanda kuri nyore uye kugadzirisa kuri nyore.Muchina unogona kushandiswa nyore nemunhu wese.
-Nekungotsiva mold, kugadzira katoni uye nzira yekupinza inogona kugadzira makatoni ane saizi yese zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
• Nyore kuisa uye kushanda, inoda kugadziridzwa kushoma kwekuita kwakanyanya uye hupenyu hunobatsira.
• Integrated digital control nePLC uye high tech touch screen controls kuitira nyore kushanda.Zvese zviitiko zvinodzorwa nePanasonic servo system.
• Chengetedzo nhoo inosangana nemirairo yakasimba yekuchengetedza.
• Yakasimba conveyer system inotyairwa nemhando yepamusoro mota.Inogadziriswa conveyer dhairekitori kuti igare neyakasiyana zvigadzirwa.
• Katoni isingakodzeri inogona kuonekwa nenzira yekuona Bhodhoro jam yekuona.
• Kugadziriswa kwemagetsi torque kukosha kubvisa kukanganisa kurongedza uye kuderedza kuisa kupfeka.
1) .PLC yakasanganiswa nemunhu / muchina interface LCD touch screen controller.
2).Stainless simbi furemu kuvaka uye zvinoriumba mureza.
3).Kumhanya kwemazita kunowiriraniswa otomatiki nekumhanya kweconveyor kuti ive nechokwadi chekunyorwa kwemhando.
4).50 Job Memory kuitira nyore kuyeuka.
5).Precision servo mota dhiraivha pane label misoro.
6) .Evesure GMP zvakatipoteredza zvinodiwa.
7) .Professional HMI touch screen: more humanized touch control screen
8) .Label applicator iva neHigh quality servo motor
Magetsi AC380V 50/6 OHz 3山
Punching Frequency 20-30/Maminitsi
Specification Ofbhodhoro/tireyi saizi Inogona Kugadzira SeZvinodiwa Mutengi
Saizi (L) x (W) x (H) 8090mmx3220mmx1786mm
Zvakapfuura: liquid bhodhoro kurongedza muchina
Zvinotevera: Lipstick yezasi yekurevera muchina
Hunhu hwakanaka China Jy-996t High Giredhi Auditorium...
Kutengesa Kutsva kweChina Nyowani Dhizaini Otomatiki Labe...
OEM Yakagadzirirwa China Self-Adhsive Labeler
fekitari yakaderera mutengo China SGS uye Ce Certificatio...
Chinese wholesale China S-conning tech Prefille...
Printer For Cosmetics Jars Bottles, Commercial Bottle Labeling Machine, Sticker Labeling Machine Manufacture, Plastiki Chisimbiso Machine, Syringe Assembly uye Labeling System, Label Applicator Machine Yemabhokisi,